Webmail: ny safidy anananao | Avy amin'ny Linux
Isaac | | Tambajotra / seriver, Tutorials / Manuals / Tips
Azo antoka fa efa manana iray na maromaro ianao kaonty mailaka, fa angamba somary tsy faly amin'ny serivisy ianao na mitady serivisy manana toetra manokana. Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity dia hahita mpitari-dalana tsara ianao hahafantarana izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny serivisy mailaka.
Ankoatra izany, hianaranao ny sasany amin'ireo tsiambaratelo sy antsipirian'ny teknika amin'ny tontolon'ny mailaka hahafahanao mahafantatra ny fomba fiasan'ireny serivisy ireny na ny fomba ahafahanao manamboatra ireo mpanjifanao manokana na mpizara mailaka hahafahanao mandefa sy mandray tsara ireo mailakao ...
1 Webmail vs client mailaka
1.1 Ahoana ny fananganana mpanjifa
1.2 Mampiasà mutt
2 Serivisy mailaka malaza sasany
3 Ahoana ny fomba hamoronana mpizara mailaka anao ao amin'ny Linux
Webmail vs client mailaka
Tokony ho fantatrao fa afaka mandefa na mandray mailaka amin'ny fomba isan-karazany. Na dia indraindray aza ny fahasamihafana misy eo amin'ny roa dia manjavozavo amin'ny alàlan'ny fahafahany mampiasa roa amin'ny serivisy mailaka maro ankehitriny. Ohatra, ny GMAIL, serivisy Google malaza, dia azo ampiasaina amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa.
Fa andao hojerentsika ireo fombafomban amin'ny fomba antsipiriany kokoa ...
Webmail: Izy io dia serivisy mailaka miorina amin'ny interface web. Izany hoe, azonao atao ny mitantana ny mailakao avy amin'ny tranokala ary na inona na inona fitaovana misy fifandraisana Internet. Raha lazaina amin'ny teny hafa, serivisy mifototra amin'ny rahona izy io, tsy mila mametraka programa eo an-toerana na manao karazana fikirakirana. Amin'ity tranga ity, ny hafatra dia hotehirizina amin'ny lozisialy lavitra ananan'ny mpanome tolotra. Izany indrindra no mahatonga ny toerana fitahirizan-kafatra ho an'ny hafatra sy ny firaketana ho an'ny mpampiasa tsirairay dia voafetran'ny mpamatsy ary mety samy hafa amin'ny serivisy iray mankany amin'ny iray hafa.
Mpanjifa mailaka: Tsy toy ny etsy ambony, amin'ity tranga ity dia mila programa apetraka eo an-toerana ianao, na amin'ny PC-nao na amin'ny findainao. Ohatra, manana programa toa an'i Mozilla Thunderbird na Microsoft Outlook ianao, na fampiharana Android toa ny an'ny GMAIL (tsy hoe mifanaraka amin'ny serivisy Google ihany, fa koa amin'ny hafa), Blue Mail, Aqua Mail, sns. Ataovy araka ny mety azy, amin'ity tranga ity dia ilaina ihany koa ny manamboatra ny angon-drakitra fidirana amin'ny client hahafahany miditra amin'ny boaty mailaka. Raha ny marina dia azonao atao ny manamboatra azy io mba hitehirizana ny mailaka eo an-toerana ary hosorana ilay mpizara lavitra (ny mailaka taloha ihany no azonao atao amin'ny programa client) na koa tahirizina ao amin'ny mpizara. Amin'ny tranga voalohany dia mety hitera-doza ianao raha very ny fitaovana, simba izany, na voafafa izy ireo noho ny antony rehetra, tsy afaka miditra amin'ireo hafatra intsony ianao.
Ahoana ny fananganana mpanjifa
Eny, amin'ny tranga misy ny mpanjifa mailaka dia mila mametraka ny programa na fampiharana ianao ary manatanteraka ny fanaingoana ilaina. Ity dia miteraka fisalasalana betsaka amin'ireo mpampiasa tsy dia manana traikefa. Izay no antony hanomezako ohatra iray amin'ny fikirakirana serivisy mailaka IONOS (1 & 1 teo aloha) izay azo ampiasaina hanamboarana ny mpanjifa toa ny Thunderbird, GMAIL, sns.
Lo Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahafantatra ny angona serivisy mailaka izay anananao, na ny GMAIL, Yahoo!, ilay ananan'i IONOS (na serivisy hafa) izay manome anao mailaka manana ny fonenany manokana, sns. Amin'ity ohatra ity dia andao alao sary an-tsaina hoe ireto izy ireo:
User anarana: info@micorreo.es
Server mpizara: angon-drakitra fikirakirana ho an'ireo mailaka miditra amin'ny mpanjifa.
Anaran'ny mpizara: miovaova arakaraka ny serivisy io, tadiavo ilay iray ho an'ny tranga manokana anao. Ohatra, ho an'ny IONOS dia:
seranana: Matetika izy ireo dia mitovy amin'ny ankamaroan'ny serivisy, na dia mety nisy nanova azy ireo aza noho ny antony ara-piarovana ka tsy mahazatra azy ireo:
fiarovana- mety amin'ny lahatsoratra tsotra, na voahidy hahazoana fiarovana fanampiny toy ny SSL / TTL, sns. Tokony hampahafantarinao ny tenanao ny momba anao manokana. Amin'ny tranga IONOS, dia StartTLS.
Server mpizara: angon-drakitra fikirakirana ho an'ny vokatra mailaky ny mpanjifa.
Anaran'ny mpizara: smtp.ionos.es
ny hafa: ny mpanjifa sasany dia mety hanome anao safidy mandroso hafa hisafidianana, na hanontany anao ny fanamarinana na ny fomba famantarana, raha te-hiditra ny teny miafina isaky ny miditra ianao, raha tadidinao izany, sns.
Hatreto ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny serivisy mailakao. Ankehitriny dia hametraka ohatra iray amin'ny fomba ataovy amin'ny client ny fanaingoana Thunderbird, saingy azo ampiharina amin'ny fampiharana hafa toa an'i GMAIL, sns. Mitovy na mihoatra ny mitovy, ny filaharana, ny anaran'ny safidy sasantsasany, na ny toerana misy ny safidin'ny fanovana dia samy hafa ... Eny, ny dingana hatao dia:
manokatra Thunderbird amin'ny solosainao mifandray amin'ny tamba-jotra.
Amin'ny pejy voalohany dia ho hitanao Manangana kaonty ary zana-kazo antsoina hoe Kaonty mailaka. Tsindrio eo.
Ankehitriny misy varavarankely misokatra ary manontany anao ny anaranao, ny adiresy mailaka ary ny teny miafinao. Misy ihany koa ny safidy azonao asiana marika ka mahatadidy ny teny miafiny ary tsy mangataka izany isaky ny te hiditra ianao. Raha atao teny hafa, amin'ny tranga IONOS, dia ho ohatra: Pepito, info@micorreo.es ary ny password_que_hayas_elegido tsirairay avy. Rehefa tafiditra dia tsindrio ny bokotra hanohizana.
Miseho indray ny efijery vaovao iray izay anontaniany anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny serivisinao. Ho hitanao fa misy tsipika roa, antso iray Narahi- ary ny iray hafa sariaka. Izy ireo dia manondro ny angon-drakitra mpizara miditra sy mivoaka izay nasehoko etsy ambony. Mila mameno fotsiny ny fampahalalana mety amin'ny antsipiriany izay nasehoko teo aloha ianao. Etsy andanin'izany, misy fizarana ho an'ny teny miafina ahafahanao misafidy eo amin'ny Autodetect, Normal (lahatsoratra tsotra), Encryption, sns., Amin'ny fotony, avelao ho Auto (raha tsy mandeha izy io dia safidio ny encryption), raha tsy hoe serivisy manokana ny serivisinao. mampiasa hafa. Ao amin'ilay iray mivoaka, ny safidin'ny SMTP dia efa voafantina amin'ny alàlan'ny default ary tsy azonao ovaina izany, fa amin'ny miditra dia azonao atao ny misafidy eo amin'ny IMAP sy POP3. Safidio izay nofidinao dia handeha, fa… inona no mahasamihafa azy? Azavaiko tsara:
IMAP: dia protokol iray izay miasa mivantana amin'ny mpizara. Noho izany, hijerena ilay mailaka dia hifandray ao izy ary hampiseho ny atiny. Ny tombony dia ny fisian'ny mailaka ho an'ny fitaovana rehetra na mpanjifa efa namboarinao ary ho hitan'ny rehetra ny fanovana rehetra ary raha manana olana ny fitaovan'ny mpanjifa dia tsy ho very ireo mailaka. Izany no mahatonga azy io no safidy tsara kokoa. Ny zavatra tokana tokony ho fantatrao dia hoe raha mamorona lahatahiry avy amin'ny IMAP ianao dia tsy ho azo idirana amin'ny POP3.
POP3: izy io dia protokol iray mifandray amin'ny mpizara ary misintona ny mailaka rehetra eo an-toerana. Raha vantany vao vita izany dia esoriny amin'ny mpizara izy ireo, noho izany, tsy ho afaka hampiasa fitaovana hafa izy ireo. Ho afaka hiditra azy ireo eo an-toerana ihany ianao, izany hoe, raha te-hijery mailaka taloha avy amin'ny client na fitaovana hafa ianao dia tsy ho afaka. Raha sendra misy zavatra mitranga amin'ilay fitaovana nampidinana azy ireo dia ho very ny mailakao. Izany no antony tsy safidy natolotra azy io. Ny tombony tokana dia ny famelana toerana amin'ny servera (saingy io no tadidinao ao an-tsainao) ary hisorohana ny famenoana azy io ary afaka miditra amin'ireo mailakao avy eo an-toerana ianao nefa tsy mila fifandraisana ...
Farany manindry vita ary voila, izao dia hasehony anao ny efijery lehibe miaraka amin'ny boaty, boaty, fako sns. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia azonao atao ny manomboka mampiasa ny mailakao amin'ny mpanjifanao.
Azo antoka fa efa fantatrao mutt, dia programa zotram-baiko izay ahafahanao mandefa mailaka avy amin'ny console Linux. Raha nametraka ilay fonosana avy amin'ny toeran'ny distro anao ianao dia tsy ho sarotra loatra ny fampiasana azy.
Ity mpanjifa ity dia mila ny fanahafana toy ny hafa. Saingy amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mamorona na manova ny fisie ianao ./muttrc:
Avy eo dia tsy maintsy mamorona lahatahiry koa ianao:
Ary ho alefaso ny mailaka sy ny firaketana, azonao ampiasaina ity baiko tsotra ity:
Ary azonao atao aza ny mampiasa an'io amin'ny script ...
Serivisy mailaka malaza sasany
Raha vantany vao hainao ny manavaka ny Webmail sy ny mailaka mpanjifa, dia hahita vitsivitsy isika izao serivisy mailaka fantatra (na dia azonao atao aza ny manamboatra azy ireo hiditra amin'ny mailaka):
Gmail: dia ny serivisy Google maimaimpoana, malaza sy be mpampiasa. Tombony ho anao ny manome anao fidirana amin'ny serivisy fanampiny marobe avy amin'ity orinasa ity, toa ny GDrive, afaka mampifanindry ny angona Android, Kalandrie, Google Docs anao, ary maro hafa. Manana safidy fandoavam-bola mihitsy aza izy hahazoana fidirana amin'ny serivisy G Suite fanampiny, mety ho an'ireo izay mila zavatra bebe kokoa, orinasa sns. Manana habaka fitehirizana maimaimpoana 15 GB zaraina amin'ny serivisy hafa (azo ovaina miaraka amin'ny safidin'ny fandoavam-bola), ary manana fahafaha-miraiki-pitia 25GB (na 50MB ho an'ny serivisy hafa) Afaka mandefa habe lehibe kokoa ianao amin'ny fampiasana rohy GDrive na amin'ny fizarana ny atiny amin'ny kaonty hafa. Mazava ho azy, manohana ny fikirakirana miaraka amina mpanjifa na ny fampiasana azy avy amin'ny interface web (webmail).
Yahoo!: ity dia iray amin'ireo tolotra malaza indrindra. Toy ny teo aloha, mamela ihany koa ny fikirakirana avy amin'ny client na hampiasaina ho webmail. Manolotra habaka malalaka 1GB izy, na mihoatra raha mandoa ianao. Raha ny momba ny miraiki-po dia 25MB ihany koa no azonao tratrarina.
SquirrelMail: serivisy rindrambaiko maimaimpoana tena mahaliana (eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GNU GPL) voasoratra ao amin'ny PHP. Azo natao ho an'ny Linux, FreeBSD, macOS, ary Windows. Ity serivisy webmail ity dia noforonin'i Nathan sy Luke Ehresmantam, izay nanaraka ny fenitra HTML 4.0 hanatsarana ny fifanarahana amin'ireo mpizara tranonkala. Izy io dia azo alamina miaraka amina mpanjifa, manohana plugins hanitatra ny fahaizany ary manampy asa vaovao ho an'ny ivon'ny fampiharana, ary misy amin'ny fiteny 40 mahery.
Outlook.com: io no serivisy Microsoft malaza, miaraka amin'ny fahafaha-mampiasa na amin'ny maody webmail na amin'ny fikirakirana mpanjifa. Ity serivisy ity dia mifandray amin'ny hafa amin'ny orinasa, toa ny Office, Kalandrie, OneDrive, sns. Tsy loharanom-baovao misokatra izy io, na dia manana fomba maimaim-poana aza (sy famandrihana karama hafa). Ao amin'ny serivisy maimaimpoana dia manana toerana 15GB ho an'ny kaontinao ianao ary ho an'ny fetran'ny fikajiana dia manana 20MB na 10MB ho an'ny Exchange ianao.
OpenMailBox: Serivisy iray hafa izay heverina ho lany tamingana ankehitriny noho ny tsy fisian'ny hetsika toa ny Squirrel, ho fanampin'izay, nisy ny olana tamin'ny taona 2020 izay efa nanome famantarana ny zavatra hitranga. Ity serivisy mailaka ity dia mitovy amin'ny hafa, mampiasa rindrambaiko maimaimpoana ary mamela ny fikirana miaraka amin'ny mpanjifa raha tianao. Io dia namela fametahana hatramin'ny 500MB isaky ny hafatra, ary nanana habaka virtoaly 1GB fotsiny. Ny interface web dia nadika tamin'ny teny espaniola, frantsay, anglisy, italianina, irlanda ary poloney.
Zoho: fantatra ihany koa ity serivisy hafa ity. Ao amin'ny kinova maimaim-poana, manohana hatramin'ny mpampiasa 25 isan-karazany izy, manana fiasa sasany izay aloany amin'ny serivisy hafa, ary manana fitaovana fiaraha-miasa sy birao mahaliana izy io. Manana fetran'ny 25MB ho an'ny serivisy maimaim-poana ianao na 30MB ho an'ny serivisy aloa, ary 5GB ho an'ny kaonty maimaim-poana.
ProtonMail: izy dia iray amin'ireo serivisy mailaka tsara indrindra (azo alamina miaraka amin'ny mpanjifa), ilay nofinidin'ny orinasa maro izay tia filaminana sy tsiambaratelo bebe kokoa. Raha ny marina dia manana fiasa miafina mahafinaritra izy io, ary fampidirana hafatra miafara amin'ny farany. Raha ny habaka azo alaina amin'ny maody maimaimpoana dia mahatratra 500MB izy ary misy mailaka 150 isan'andro. Raha ny fetran'ny fametahana dia mamela 25MB farafaharatsiny ary miaraka amina firaketana hatramin'ny 100 isaky ny mailaka.
Webmail Horde- Mety ho safidy tsara ho an'ireo mpampiasa efa kamboty taorian'ny SquirrelMail sy OpenMailBox. Ity mpitantana mailaka ho an'ny webmail ity (azo atao koa ny mampiasa client) dia voasoratra ao amin'ny PHP, ary ny mpamorona azy dia namorona rafitra tsara miaraka amina fitaovana marobe eo am-pelatananao, avy amin'ny mailaka mihitsy, amin'ny alàlan'ny fandaharam-pifandraisana, naoty, amin'ny alàlan'ny lalàna. sivana, sns. Izy rehetra dia manana lisansa LGPL. Amin'ny Espaniôla izy io ary azo ovaina tokoa.
Ahoana ny fomba hamoronana mpizara mailaka anao ao amin'ny Linux
Misy maro mpandraharaha fandefasana paositra na MTA, toy ny Postfix, SendMail, sns. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka manamboatra ny mpizara mailaka anao mba tsy hiankina amin'ny serivisy teo aloha. Ohatra, raha hamboarina ao amin'ny Ubuntu amin'ny fampiasana SendMail ianao dia afaka manaraka ireto dingana ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Webmail: ny safidy anananao